HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinMESİAD: 'Ekwesịrị Systemrụ Kọlọ Light Light Kama nke Metro ruo Mersin'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, Mediterranean Region, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey 0
ụzọ ụgbọ oloko mesiad mersine kama nke ụgbọ oloko
Onye isi ala MESİAD Hasan Engin kwusiri ike na Mersin enweghị oge iji nwee ike idozi nsogbu ụgbọ njem, nke bụ otu n'ime nsogbu kachasị na obodo anyị, Hasan Engin kwuru na nkwupụta ya na ekwesịrị ime usoro ụgbọ okporo ígwè ọkụ kama nke metro ezubere na Mersin. Ringbufe Metro ga-adị ọnụ ala nke Engin Engin, etinyere usoro nsogbu njem njem na Mersin na ụgbọ okporo ígwè dị mfe, aga-edozi ya n'oge dị mkpirikpi na ọnụ ala, "ka o kwuru.
Mersin Industrialists na Business People Association (MESIAD) Onye isi oche Hasan Engin kwuru na a ga-edozi nsogbu njem ụgbọ mmiri nke obodo mepere emepe dịka Mersin n'ụzọ dị mkpa, ma ọ bụghị ya, Mersin ga-abụ onye meriri. Onye isi ala Engin, nsogbu njem njem; mmetọ ikuku, akụnụba obodo na njem nleta adakwasịla nnukwu nsogbu na njem ụgbọ mmiri aghọọla oke ọgbaghara maka Mersin soro ndị mmadụ wepụta. Onye isi ala Engin gbara ndị isi obodo na ụlọ ọrụ ndị ọzọ niile ume ime ngwa ngwa.
“METRO MERSIN erughị eru imesi ya ike”
Onye isi ala MESIAD Hasan Engin, onye mere nkwupụta maka Mersin Metro, mara ọkwa na ọrụ ahụ ga-amalite na 2020 na Mersin, kwuru na oru ngo metro adabaraghị maka akwụkwọ Mersin nakwa na akụ na ụba obodo na mmefu ego nke obodo ukwu.
Onye isi ala Engin; Yerine N'ihi usoro ụgbọ okporo ọkụ dị mfe nke enwere ike ịrụcha ngwa ngwa na ọnụ ala n'obodo Mersin ndị njem, ndị njem ga-eme njem nleta ugwu na n'oké osimiri. Ekwesịrị iji usoro ụgbọ ala dị mfe dozie nsogbu nke njem njem, na obere oge, yana ọnụ ala. Obodo Mersin mepere emepe nwere ike jiri ihe aka ya wee mezue oru a. Ọrụ ụgbọ ala adịghị mkpa ”.
ONYE ỌZỌ ENGİN NA-enye Nlele NSO
Onye isi obodo Hasan Engin kwuru na nhọrọ na-ezighi ezi ga-efu Mersin site na atụnyere usoro ụgbọ okporo ígwè dị na Adana na obodo ndị gbara ya gburugburu. Mersin kwesiri irite uru na mkpebi siri ike, ma ọ bụrụ na ị na-eme ụzọ ụgbọ oloko ọ nweghị onye ọ bụla nwere ike ijikwa ya. Dịka ọmụmaatụ, na Adana; n'ihi ụzọ na-ezighi ezi na mmasị ahụghị mmasị achọrọ. Adana enweela nsogbu kemgbe ọtụtụ afọ. Mgbe anyị tụụrụ ihe atụ na mpaghara ndị gbara ya gburugburu; ndị mmadụ na-ahọrọ ụgbọ okporo ígwè dị mfe maka njem na ala. Ọ bụghị ọrụ iji ọtụtụ kilomita n'obodo dị n'oké osimiri na-enweghị njem n'ime ala na-ekiri oké osimiri na ugwu. "
“EBỌTA NKE ANY ST NA-EKPERE NA-EGBU, Ọ B ,R S Nsogbu ahụ”
N'ikwu okwu banyere Mgbanwe Harbor-Hal, Onye isi ala Engin kwuru na Hal Junction, nke arụchara ọrụ ya, arụghị ọrụ nke ọma n'ihi ụzọ mbata nke ọdụ ụgbọ mmiri. ekwesịrị ịbanye ụzọ ụzọ mbata ga-esi banye mpaghara nke ya ngwa ngwa. Enwere ike ịgbanwe ụzọ ụkwụ ndị na-agafe agafe na mgbidi ọdụ ụgbọ mmiri iji wee gbasaa ụzọ. Okporo ụzọ na-aga n'okporo ụzọ mmiri na-ejupụtakarị. Ọkara ọkara agachaala ma a naghị edozi nsogbu okporo ụzọ. Ọzọkwa, otu ọgba aghara ahụ na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na Mersin Port emeghị usoro a, enweghị ụzọ maka okporo ụzọ ebe ahụ. Oge mgbatị steeti anaghị arụ ọrụ dị ka ngọngọ n'ihi obe.
TRBANR ARE FROMB FROMR THE SITE NA NSỌ N'ALAEZE NKE EGO NA-EGO NA EGO NA-EGO
N’imesi ike na ịkwesịrị ime ka njem si n’ogbe ụlọ ọrụ gaa na ebe ọrụ na ụlọ ọrụ aka, Onye isi ala Engin kwuru, “Isi ihe ekwesịrị ikwu bụ na ndị nrụpụta ụlọ ọrụ nwere obere ihe nrịba nke nkeji oge 45 n’ọnụ ụzọ ọwụwa anyanwụ mgbe ị na-abanye n’obodo ahụ site na OIZ na ahịrị ọwụwa anyanwụ. Onweghi uzo ozo n’azu uzo ahu, ya mere anyi n’agha; 2. Ekwesịrị imehe ngwa ngwa 18 ozugbo enwere ike site na Roadzọ Industrial ruo Mpaghara mpaghara Tarsus ahaziri. Site na mmecha nke uzo a, uzo ozo gha enwe uzo ozo ma ewezuga uzo Deliçay nke bu uzo nke diri Mersin site na ano. Ike a ebe a ga-ebelata. N'otu oge ahụ, ọ dị ezigbo mkpa ịhazi usoro okporo ụzọ dị n'okirikiri ụlọ ọrụ mepere emepe site n'okporo ụzọ a ga-agbatị, na usoro nke obodo ukwu ”.
A ghaghị ime atụmatụ mgbochi kama tram Gaziantepe 29 / 01 / 2014 A ghaghị ime atụmatụ atụmatụ tram Gaziantepe kama ụzọ ụgbọ oloko: Ụlọ ọrụ Gaziantep nke ndị Architect dọtara uche gaa nsogbu nke obodo tupu ntuli aka mpaghara. Severoglu, 'Nkwupụta Ndozi Obodo' na akụkọ a kwadoro aha gọọmentị obodo iji bụrụ onyeisi oche nke nsogbu obodo ahụ na ngwọta maka nsogbu ahụ, ọ gbakwụnyere. Sıtkı Severoğlu, bụ onye haziri ogbako ogbako na Ụlọ Ndị Ọkà, mara ọkwa ha kwadebere tupu ntuli aka obodo. N'ịchọpụta na okporo ụzọ bụ nnukwu nsogbu na obodo ahụ, Severoğlu kwuru, sị, Obodo Cak
A ghaghị iwu okporo ígwè okporo ígwè na Manisa 12 / 07 / 2012 Na-aza ajụjụ a ma ndị odeakụkọ nwere ike inye aka na OSB n'ọhịa nke okporo ụzọ, Türek kwuru, konusunda N'ezie ọ bụ ọrụ dị mma. Okwu ndị dị ka ebe a na-agbanye ala na omenala bụ isiokwu nke kwesịrị ịbụ na Mayors. Anyị na-asọpụrụ ya. N'otu oge ahụ, ha na-agbaso ihe ha na-eme ma anyị nwere akụkụ nke njem njem ọha na eze nke nwere njikọ chiri anya na anyị. Enwere m olileanya na anyị nwere ike ịmepụta ihe na Cengiz Bey; Anyị ga-enwe ike ịsụ ụzọ ụzọ ụgbọ okporo ígwè iji kpochapụ okporo ụzọ ụgbọ ala n'etiti Manisa na Ngalaba Azụmahịa Industrial, anyị ga-ekwurịta banyere ha. Ụgbọ okporo ígwè okporo ụzọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere n'etiti okporo ụzọ ọkụ na ezigbo Manisa
Obodo Sakarya Metropolitan Munich City Center nke uzo uzo uzo uzo - nke di n'etiti 2. Sistem Ntanetị Na-acha Uhie 25 / 07 / 2012 Obodo Sakarya Metropolitan, Merkezi Bazaar Centre - 2 Yenikent. Edere ọhụụ ọhụrụ gbasara usoro usoro ihe nkedo okporo ụzọ. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; omumu ihe omumu nke mbu na omumu ihe omumu di iche iche na aga n'ihu. Ndị isi anyị jụrụ ajụjụ banyere isiokwu a kwuru na ọrụ ahụ ga - ewe ụbọchị 480 na mgbe ọ rụchara ọrụ ndị ahụ, a ga - ewebata ọrụ ahụ na usoro ntinye ego nke 2013 ma kwuo ọkwa dị nro. Maka ozi ndị ọzọ biko pịa: Ebe E Si Nweta Ego: Nkwụnye ego
Obodo Sakarya Metropolitan Munich City Center nke uzo uzo uzo uzo - nke di n'etiti 2. Sistem Ntanetị Na-acha Uhie 30 / 07 / 2012 Sakarya Metropolitan Municipality Presidency, "Arcade Center - Yenikent n'etiti 2. Edere ọhụụ ọhụrụ gbasara usoro usoro ihe nkedo okporo ụzọ. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; omumu ihe omumu nke mbu na omumu ihe omumu di iche iche na aga n'ihu. Dị ka isi anyị na-gbara ajụjụ ọnụ na isiokwu nke ọmụmụ na oru ngo ga-480 ụbọchị ha dere maka obi ga-dabere na 2013 afọ ego usoro ihe omume mgbe ẹkụre ọmụmụ. Dị ka ọ na-amaghị, January 04 2012 ụbọchị àjà anakọtara "Public Transport Ibu ụzọ Transport Master Plan na Nkwadebe nke Preliminary feasibility Study na Preliminary Design nke Systems Consulting Service" meriwo obi maka engineering ike Mescioğlu ...
Sakarya Light Rail System Project n'etiti Çarşı Center na Yenikent 2. mmemme mbụ na nchọpụta tupu ọmụmụ ihe nke okporo ígwè okporo ígwè 28 / 03 / 2013 N'etiti Sakarya Metropolitan Municipality, Çarşı Center - 2 Yenikent. Edere ọhụụ ọhụrụ maka usoro Sakarya Light System System. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; Ihe omuma nke mbido na omumu ihe omumu nke bu ihe omuma. Ndị ọchịchị, mgbe ha rụchara ọrụ na ọkara nke abụọ nke 2013 ụlọ ọrụ nwere ike ịbịa. Dịka a maara, a na-eme nchọpụta ụzọ nke usoro, nke dị ihe dịka 20 kilomita, ogologo. Ụlọ ọrụ ma nyefee obodo. Usoro a ga-eguzobe n'okporo ụzọ ga-ekpebi dị ka Sakarya Transportation Master Plan. Maka ozi ndị ọzọ biko pịa: Ebe E Si Nweta Ego: Nkwụnye ego
A ghaghị ime atụmatụ mgbochi kama tram Gaziantepe
A ghaghị iwu okporo ígwè okporo ígwè na Manisa
Sakarya Light Rail System Project n'etiti Çarşı Center na Yenikent 2. mmemme mbụ na nchọpụta tupu ọmụmụ ihe nke okporo ígwè okporo ígwè
Sakarya Light Rail System Project Center - 2 Yenikent. Ihe omuma nke mbido na omumu ihe omumu nke bu ihe omuma
Metrobus na-abịa Şanlıurfa kama usoro Light okporo ígwè
A na-akwado usoro okporo ígwè uhie kama ịkọwa ihe
E kwesịrị ime ka ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè Boztepeye dị
N'etiti Malatya na Elazığ